घरपालुवाको होस्टेल - पेट केयर - नारी
कार्तिक ३०, २०७३व्यस्त सहरिया जीवनमा धेरैले घरपालुवा जनावर पालेका हुन्छन् । घरपालुवा परिवारको सदस्यकै रूपमा रहने भएकाले चाडपर्व अथवा घुम्न बाहिर गएका बेला समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । घरका सबै सदस्य बाहिर गएका बेला घरको यो सदस्यलाई कहाँ राख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तै अवस्थालाई विचार गरेर काठमाडांै तथा अन्य सहरहरूमा केनल तथा डग बोर्डिङहरू संचालित छन् जसबाट धेरैलाई सहयोग पुगेको छ ।
उपयुक्त केनल/बोर्डिङको छनोट
आफूलाई जानकारी नभए घरछिमेक, साथीभाइसँग यस विषयमा सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ । आफ्ना घरपालुवालाई कुनै केनलमा राख्नुअघि केही कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।
 केनलमा सरसफाइको अवस्था ।
 प्रत्येक घरपालुवाका लागि छुट्टै केनलको व्यवस्था ।
 त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूले घरपालुवासँग गर्ने व्यवहार ।
 बिरामी र स्वस्थ घरपालुवा राख्ने ठाउँको उचित व्यवस्था ।
 पशुचिकित्सक तथा प्राविधिकको व्यवस्था
 ताजा खाना एवं सफा पानीको व्यवस्था ।
 केनलसँगै घरपालुवा खेल्ने ठाउँको अवस्था ।
 आकस्मिक उपचार सेवा ।
 केनल अथवा बोर्डिङको छनोटपछि आफ्नो घरपालुवाका लागि केही तयारी आवश्यक हुन्छ ।
 घरपालुवालाई जुकाको औषधि तथा किर्ना–उपियाँको औषधि दिइएको छ कि छैन यकिन गर्ने ।
 घरपालुवालाई बर्सेनि लगाउनुपर्ने खोप समयमा दिइएको छ छैन विचार गर्ने ।
 आफ्नो घरपालुवालाई छारे रोग, मुटु रोग छ भने केनलमा जानकारी गराउने ।
 आफ्नो घरपालुवालाई केनलमा छोडेर आउँदा उदास नहुने । हाँसीहाँसी उसलाई माया गरेर फर्कने ।
बिर्सने त होइन ?
धेरैको मनमा केही दिनको बाहिरी बसाइपछि फर्केर आउँदा घरपालुवाले आफूलाई बिर्सने त होइन भन्ने शंका हुन्छ । प्यारो घरपालुवाले केही दिन होइन वर्ष दिन नै टाढा भए पनि आफ्नो घरधनीलाई बिर्संदैन ।
उपयुक्त केनल तथा बोर्डिङको छनोटबाट नै घरपालुवा सुरक्षित रहन सक्छ । ढुक्कसँग बिदा मनाउन तथा चिन्तामुक्त भै भ्रमणको आनन्द लिन यस्तो सुविधाको फाइदा उठाउन सकिन्छ ।
एडभान्सड पेट हस्पिटल,
श्रावण १८, २०७३ - के घरपालुवाको कलेजो स्वस्थ छ ?
जेष्ठ २८, २०७३ - घरपालुवाको स्याहार
फाल्गुन ५, २०७१ - घरपालुवाको निवास